विप्लवको नेकपामा जिम्मेवारी हेरफेर, कसलाई कुन जिम्मेवारी? – Everest Dainik – News from Nepal
विप्लवको नेकपामा जिम्मेवारी हेरफेर, कसलाई कुन जिम्मेवारी?
काठमाडौंः प्रतिबन्धित नेकपाले आफ्ना नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । डेढ साताअघि बसेको बैठकले पार्टीको कमान्ड र ब्युरोको नेतृत्व फेरबदल गरेको हो । फेरिएको संरचनामा राजधानीसहितको मध्यकमान्ड महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’कै निगरानीमा रहने स्रोतले बतायो ।
चार कमान्ड रहेको संगठन संरचनामध्ये सो पार्टीले मध्यकमान्डमा राजधानी काठमाडौंलगायत जिल्लालाई समेटेको छ । मध्यकमान्डलाई हेडक्वार्टर (विप्लव) को प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी इन्चार्जमा खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ तोकिएको छ । पछिल्लोपटक मध्यकमान्ड हेर्दै आएका हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ काभ्रेबाट पक्राउ परेका थिए ।
स्थायी समिति बैठकले मध्यपश्चिम कमान्डको जिम्मेवारी चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’लाई दिएको छ । त्यो क्षेत्र हेर्दै आएका स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढामगर ‘विषम’लाई पूर्वी कमान्डको जिम्मेवारी तोकेको छ । चन्द महासचिव विप्लवका दाइ हुन् ।
पूर्वी कमान्डको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अनिल बिरहीलाई प्रकाशन विभाग तोकिएको छ । यसअघि प्रकाशन हेर्दै आएका गुणराज लोहनीलाई सो विभागबाट हटाइएको छ । पश्चिम कमान्ड र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागमा स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’लाई पुरानै जिम्मेवारी तोकिएको छ । गत २८ फागुनमा सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सो पार्टीले भूमिगत शैलीमा पार्टी सञ्चालनसहित गतिविधि गर्दै आएको छ ।
नेकपाले पुरानो १४ अञ्चलसहितलाई समेटिएको २० ओटा ब्युरोअन्तर्गत जिल्ला संगठन, जनसंगठन र भ्रातृसंगठनहरू सञ्चालन गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ । जसअनुसार नेकपाभित्र मेची, कोसी, सगरमाथा, जनकपुर, पश्चिम ताम्सालिङ, पूर्वी ताम्सालिङ, उपत्यका, गण्डक, लुम्बिनी, धौलागिरी, राप्ती, कर्णाली, भेरी, सेती, महाकाली, प्रवास, मध्यपूर्व, अन्तर्राष्ट्रिय र जवस ब्युरो रहेका छन् ।
मध्यकमान्ड इन्चार्ज विश्वकर्माले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत आमहड्तालका क्रममा घाइते आफ्ना ५ कार्यकर्तामाथि उपचारको क्रममा भइरहेको ज्यादती रोक्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: Biplav, nekapa